Australian Catholic University - Ọmụmụ na Australia
Students (ihe ruru.) : 32 000
Echefukwala discuss Australian Catholic University
Australian Catholic University (ACU) na a ọha bụghị-nke na-enweta na mahadum ejiri ego site na Australian Government.
Ọ na-ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ niile kweere.
Australian Catholic University (ACU) eme ndị Catholic n'aka intellectual Tradition ime ka a pụrụ iche n'ọnọdụ ka elu education.We inyocha omenala, -elekọta mmadụ, usoro ziri ezi na okpukpe mbipụta site na oghere nke Catholic n'aka intellectual Tradition na-akụzi, nnyocha na ọrụ.
Site na eme na-aga n'ihu ihe ọmụma na-akụziri, ahụ ike, azụmahịa, na Humanities, ndị sayensị na nkà na ụzụ, iwu, na-na okike nkà, ACU-eme ka ya local, mba na mba obodo.
Anyị na-agụsị akwụkwọ ga-ọkà na ha họọrọ ubi, usoro ziri ezi na àgwà ha, na a mepụtara oké egwu àgwà nke uche, mmas nke dị nsọ ná ndụ na a nkwa na-eje ozi ọdịmma nke mmadụ.
The Company of Australian Catholic University (ACU) mma na Mission Nkwupụta (“The ACU Mission”) na 23 Ka 2014 Kwa Afọ General Nzukọ.
ACU bụ oké ebe izute ndị na-enwe ọhụrụ ahụmahụ.
Onye ọ bụla campus-amụrụ mkpakọrịta na akwado ihe dị ka barbecues, bọọlụ na concerts. E nwekwara klọb, ọha mmadụ na Sporting ihe dị ka ACU Games na University Games.
Education and Arts – areas include education, nkà na Humanities, global studies and international development studies, media communications, -elekọta mmadụ na sayensị, youth work, and creative arts, visual arts and design.
Health Sciences – areas include counselling, gburugburu ebe obibi sayensị, exercise physiology, exercise science, echiche ike, midwifery, nwa ara na-, ọrụ ọgwụ, paramedicine, physiotherapy, public health, akparamaagwa, social work and speech pathology.
Law and Business – areas include accounting and finance, business administration, azụmahịa, human resource management, ozi teknụzụ, iwu, management, marketing and occupational health, safety and environmental management.
Ị chọrọ discuss Australian Catholic University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Australian Catholic University ukara Facebook